४ महीनामा वैदेशिक व्यापार | आर्थिक अभियान
२०७८ मंसिर, २१
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को प्रथम ४ महीनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालू आवको प्रथम ४ महीनामा रू. ६५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भएको रू. ४०२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको तुलनामा करीब ६२ प्रतिशतले बढी हो । त्यस अघिको वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ४ महीना अर्थात् आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि कात्तिकसम्ममा कोभिड–१९ को असर नहुँदै करीब ११ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । निर्यातमा पनि तुलनात्मक रूपमा पोहोरको तुलनामा चालू आवमा बढेको छ । गतवर्ष यस अवधिमा रू. ४० अर्ब २० करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष रू.८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको निर्यात भई करीब १०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसअघिको वर्षको पहिलो ४ महीनामा निर्यात करीब ११ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटा चालू आवमा गतवर्षको तुलनामा ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने त्यसअघिको वर्षमा व्यापारघाटा करीब १२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आवको प्रथम ४ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयातित मालवस्तुमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यसको आयात मूल्य रू. ८८ अर्ब २५ करोड रहेको छ भने गत वर्ष आयात मूल्य रू. ४३ अर्ब ७ करोड रहेको थियो । आयात वृद्धिदरका हिसाबले करीब १०५ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकको आयातमा करीब ३४ प्रतिशतले कमि भएको थियो । प्रमुख १० आयातित मालवस्तुमा यससँगै वानस्पतिक तेल तथा बोसोजन्य पदार्थ (यसमा खास गरी कच्चा भटमासको तेल र कच्चा पाम आयल रहेका छन्) को आयात मूल्य रू. ५६ अर्ब २५ करोड रहेको छ, फलाम तथा इस्पात (आयात मूल्य रू. ५५ अर्ब ६२ करोड), मेशिनरी तथा सम्बद्ध उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ४८ अर्ब ९८ करोड), विद्युतीय उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ४६ अर्ब ९१ करोड), सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा (आयात मूल्य रू. ४४ अर्ब ६० करोड), बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरू (आयात मूल्य रू. ३१ अर्ब ३९ करोड), प्लास्टिक तथा यसका सामाग्री (आयात मूल्य रू. २३ अर्ब ९८ करोड), खाद्यान्न बाली (आयात मूल्य रू. २२ अर्ब ५७ करोड), औषधिजन्य उत्पादनहरू (आयात मूल्य रू. २० अर्ब ५५ करोड), रहेका छन् । यस अवधिमा यी आयातित प्रमुख १० वस्तुहरूले कुल आयातको ६७ दशमलव ५२ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।
चालू आवको प्रथम ४ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात भएका मालवस्तुमा वानस्पतिक तेल तथा बोसोजन्य पदार्थ शीर्षकअन्तर्गत (जसमा प्रशोधित सोयाबिन तेल र प्रशोधित पाम आयलको अंश सबैभन्दा बढी रहेको) रू. ४७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । यसको निर्यात गतवर्षको यसै अवधिमा रू. १० अर्ब ५३ करोडको मात्र भएको थियो । निर्यात वृद्धिदरका हिसाबले अति नै उच्च वृद्धि (३५१ प्रतिशत) भएको छ । दोस्रोमा मानव निर्मित प्रमुख रेसाहरू (स्टेपल फाइबर्स) को निर्यात रू. ३ अर्ब ९१ करोडको भयो । गतवर्षको तुलनामा करीब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तेस्रोमा कार्पेट तथा अन्य भुइँमा बिछ्याउने कपडा रू. ३ अर्ब १६ करोडको (निर्यातमा १५ प्रतिशतले वृद्धि) चौथोमा रू. ३ अर्ब १३ करोडको चियाकफीको निर्यात (निर्यातमा करीब ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको), तथा पाँचौँमा पशुपन्छीको दाना रू. ४ अर्ब ९७ करोडको (११८ प्रतिशतले वृद्धि) निर्यात भएका छन् । प्रमुख निर्यात हुने पाँच वस्तुहरूले मात्र कुल निर्यातको करीब ५७ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।
चालू आवको कात्तिक महीनासम्म (प्रथम ४ महीनासम्म) मालवस्तुको आयातबाट रू. १७२ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब ४८.६४ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । चालु आवको प्रथम चार महीनामा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट भएको छ । यस अवधिमा रू. ४३ अर्ब ६७ करोड मूल्यको राजस्व संकलन भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिको रू. २७ अर्ब ४३ करोड मूल्यको तुलनामा ५९ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातबाट संकलित राजस्व रू. ३५ अर्ब ६३ करोड संकलन भएको छ जुन गत वर्षको रू. २३ अर्ब २९ करोडको तुलनामा करीब ८२ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै राजस्व संकलनका दृष्टिले क्रमशः तेस्रो स्थानमा रहेको फलाम तथा इस्पात १० अर्ब ४९ करोड राजस्व वृद्धि ७७ प्रतिशतले, चौथो स्थानको विद्युतीय उपकरण ३६ प्रतिशतले तथा पाँचाैं स्थानको प्लास्टिक तथा यसका सामग्रीबाट संकलित राजस्वमा करीब ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको प्रथम ४ महीनामा संकलित कुल आयात राजस्व रकमको करीब ६१ प्रतिशत अंश यीनै प्रमुख पाँच वस्तु आयातबाट संकलन भएको छ ।
लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।